ShweMinWunSayadaw Dr. Bhaddanta Sobana ရွှေမင်းဝံဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောဘန <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
Dr. Bhaddanta Sobana
Shwe Min Wun Sasana Yeiktha
မဟာစည်နာယက၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သာသနာပြု
ရွှေမင်းဝံသာသနရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊
At the age of (11), he entered into religious order under patronage of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara of Kinbya Village and under the sponsorship (Pissayā Nuggaha) of his parents. He was ordained asanovice and his name is Shin Sobana. He was ordained to become monk under the presiding Sayadaw U Āhsara at Khanda Thein (Sīma), Mahā Pubbārāma Monastery on the full moon day of Tabodwe 1328 (1959) ME and the occasion was sponsored by Daw Aye May and her son Maung Kaung Sein of Seik-Khun Village.
Sayadaw Bhaddanta Sobana, at the age of eleven, wasastudent of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara. He studied Pāli grammar and the compendium of Abhidhammā, Vineya (Code of conducts of Monks), and Sub-commentary of Abhidhammā. At the age of sixteen, he studied Rupasaddhi, Pudsit, Niyan, Saddhāsit, yavā, Mātikā, Dhātukathā, and Yamāka from the following three Saydaws: Sayadaw U Vāsava (one of the Religious Leader of the Union of Myanmar), Head of Veluwun Pāli University, Shwebo township; Sayadaw U āneinda (Member of Sangha Counsel of the Union of Myanmar, and Abbot; Sayadaw U Lāba (Aggha-Maha-Paṇḍita), one of the Religious Leader of the Union of Myanmar. Advanced studies were carried out under the following Sayadaw: U Indaka, Paṭhana Theik-Pan Sayadaw U Indaka; Duwun Sayadaw U Sajjanabivunsa (Aggamahapaṇḍita, Abhidajamaharaṭhaguru); Hasagiri Sayadaw U Nandabivunsa (Aggha-Maha-Paṇḍita); Saddhama-Sitagu Sayadaw U ānisara (Aggha-Maha-Paṇḍita); U Sobanābiwunsa of Phayargyi-Taik, Mandalay, Sayadaw U Okkhansābiwunsa; Sayadaw U Paṇḍitābiwunsa; Professor and lecturers of Chauk-Htat-Gyi, Yangon.
He passed the courses on Pathana-Nge, Pathama-Latt, Pathama-Gyi. He also passed the government held Dhamma Cariya Examination that covers the courses on Sīlakkhan Kyan, Dhammasṅgi Kyan.
U Sobana completed the vipassana training course under the following Meditation Masters: Sayadaw Bhaddanta Sobana (The Māhasi Meditation Master), Sayadaw U Sujarta (Kammathana Ciriya). He has been the personal attendant (Picchā Samanera) to Māhasi Sayadaw until his death. After his training, he taught vipassanā meditation as an assistant meditation teacher for eight years.
He moved to Shwe-Min-Wun Sasana Yeikthā, Bahan, Yangon in 1357 M.E (1996). He continued to teach Vipassanā meditation-Māhasi Method at his new residence. He taught vipassanā meditation at Mahasi Sasana Yeiktha and Shweminwun Sasana Yeiktha andacombined teaching experience of thirty three years.
Today, in Shweminwun Sasana Yeiktha there are nearly (1,000) people took his meditation course. He added additional facilities and/or buildings to accommodate the class size. There are (100 to 150) devotees attended his Dhamma lectures.
Beginning the year 1357 M.E.(1996), he visited the following countries: Thailand, Sri Lanka, Nepal, and India. In one of his trip to India and Nepal, he was accompanied by (36) devotees and he conducted ordination ceremonies and he also gave lectures on vipassanā meditation. He was awardedatitle of Māha-Kammathāna-Ciriya by the Government of Myanmar in 1359 M.E.(1996), and in 1368 M.E.(2007), he was awarded the title of Agga-Maha-Saddhama-JotikaDaja.
He establishedabranch teaching facility in Pegu in 1361 M.E, (2000). The name of the teaching facility is called Sobanarama Shweminwun Sasana Yeiktha (Branch Facility). The facility is located in 35 acres of land and there are (57) kutis; each kuti is for two person. In the compound there are: Shangalay Maha Dhamma Baik-Mann (108X63), Monk Dining Hall-Pantint Yadana (108X63), two story building (Sein-Yadana San Kyaung). All of them were built with steel reinforced concrete construction (54X54), the Sima Hall-Sasana-binī-baddha, also with steel reinforced concrete construction (63X45), The water-sima hall with steel reinforced concrete construction (27diameter circular construction) andasteel bridge an access to water sima hall (210 in lengthX6 wide), the two story,aresidence for monks, also there are two water tower that can hold 12,000 gallon and another can hold 10,000 gallon of water for the community in compound. Beginning 1264, there has beenamonthly retreat and Sayadaw gave dhamma talk and meditation instruction.
In the same compound there isaDhamma Pala Hill and on top of the hillaPagoda, 81 high was constructed. The raising of the Pagoda Umbrella was successfully completed.
In summer, there are classes on the fundamental of Buddhism and classes to teach the Buddhist culture at Shweminwun Sasana Yeiththa, Yangon and at Sobanarama and
Shweminwun Sasana Yeiththa, Pegu. Every year, there are about (500) students attended the classes. There are regular examinations on the classes and certificates are awarded to students who passed the examination.
Kinbya village, Shwebo Township was the birth place of Sayadaw U Sobana and in the compound of the Mahapubbara Monastery, Sayadaw build residence halls for the monks andalibrary with religious and non-religious books. He also built one Dhamma Hall and one urgent Health Care Center in Kinbya village.
In Kinbya village, there isaPyi-Lone-Chanthā Pagoda and the umbrella for the Pagoda was successfully completed. Sayadaw helped established the religious organizations in Kinbya village and Ohbo village. And these organizations regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days.
Also in 1368 (2007), the chanting organization and volunteer organizations were established, and today these organizations have been regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days. Since 1361 (2000), classes on Buddhist cultures are open to the public and the classes were attended by about 200 students. The certificates were given to those students who passed the examination.
Sayadaw made it possible for the Middle school and High school students from Kinbya village to take an excursion trip for seven days to Yangon for three consecutive years. The Puja ceremonies were also held by Sayadaw where the senior citizens/ old aged people of the village were givenaday of respect by offering lunch and gifts.
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေမင်းဝံသာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာန နာယကဖြစ်တော်မူသော ရွှေမင်းဝံဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောဘနသည် အမေရိကန် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်းတော်ကြီး၌ ၂၀၀၉ ခု မေလ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်ထိ (၅)ရက် တရားစခန်းကို ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဆရာတော်အဖြစ် ဟောကြား ညွှန်ပြလျက် ရှိပါသည်။
၁၆-၉-၁၉၉၅ ဗဟုပုတ္တိကထေရီ (သားသမီးများသော ထေရီ)
၃၀-၇-၁၉၉၆ ဘဝတန်ဖိုး တရားတော်
၂၀-၉-၁၉၉၆ ဝီရိယရမ်ဘ ဝတ္ထုတရား ၈ ပါး တရားတော်
၁၅-၄-၁၉၉၇ ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုး တရားတော်
၁၆-၄-၁၉၉၇ (၃၈) ဖြာ မင်္ဂလာ (မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံ) တရားတော်
၉-၉-၁၉၉၇ ဘဝ တာဝန် ကျေပွန်ပါစေ (ဂေရာဇဇတ်)
၁၃-၄-၁၉၉၈ ဝိပဿနာရှုနည်း တရားတော်
၁၈-၄-၁၉၉၈ အရိပ်ချမ်းသာ (လောကနီတိ)
၂၀-၅-၁၉၉၈ အချိန်ရှိခိုက် လုံကလစိုက် တရားတော်
၁၆-၇-၁၉၉၈ မဟာတန ဝါနိစ္စ ဝတ္ထု တရားတော်
၃၁-၇-၁၉၉၈ တယောဇနဝတ္ထု (ကံတရားသည်သာ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ)
၃၁-၈-၁၉၉၈ တယောဇနဝတ္ထု တရားတော်
သက်တော် ၅၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
၂၇-၉-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၁)
၂၈-၉-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၂)
၂၉-၉-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၃)
၃၀-၉-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၄)
၁-၁၀-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၅)
၂-၁၀-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၆)
၃-၁၀-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၇)
၄-၁၀-၁၉၉၈ ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း ၉ ပါး (၈)
၁၃-၄-၁၉၉၉ ဝိပဿနာဆိုတာ တရားတော်
၁၄-၄-၁၉၉၉ ဝိပဿနာ အခြေခံ တရားတော်
၁၉-၈-၂၀၀၉ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းအင်္ဂါ ၄ပါး
၂၇-၈-၂၀၀၉ သောတာပန်တွင်ပြည့်စုံရမည့် ဂုဏ်အင်္ဂါ ၄ ပါး
၂၉-၈-၂၀၀၉ အဂ္ဂိဒတ္ထ ဝတ္ထု တရားတော်
၂-၉-၂၀၀၉ ပါဝေယျဆင် တိုက်ပွဲဝင် တရားတော်
၃-၉-၂၀၀၉ သမယသုတ္တန်၊ တရားအားထုတ်ရမည့် အချိန်အခါ ၅ မျိုး တရားတော်
၄-၉-၂၀၀၉ သမ္ဗဟုလဘိက္ခုဝတ္ထု၊ လုံခြုံရေးတရားတော်
သက်တော် ၅၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
၂၆-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားတော် (၁)
၂၇-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားတော် (၂)
၂၈-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားတော် (၃)
၂၉-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားတော် (၄)
၃၀-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားတော် (၅)
၁၉-၃-၂၀၀၀ သမယသုတ္တန် တရားတော်
၅-၁၀-၂၀၀၀ တရားနဲ့သာ ပူဇော်ပါ (ဓမ္မာရထေရဝတ္ထု)
၂၁-၁၀-၂၀၀၀ မျက်မှောက်ချမ်းသာရေး (၁)
၂၂-၁၀-၂၀၀၀ မျက်မှောက်ချမ်းသာရေး (၂)
၂၃-၁၀-၂၀၀၀ မျက်မှောက်ချမ်းသာရေး (၃)
၁၆-၄-၂၀၀၁ ယက္ကန်းသည်မလေးဝတ္ထု တရားတော်
၁၂-၈-၂၀၀၁ လေးဖြာချမ်းသာ ရွေးချယ်ပါ
သက်တော် ၅၄ နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ တရားပွဲ
၂၄-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၁)
၂၅-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၂)
၂၆-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၃)
၂၇-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၄)
၂၈-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၅)
၂၉-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၆)
၃၀-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၇)
၃၁-၁၀-၂၀၀၁ မှီခိုထိုက်လှ မြတ်ဓမ္မ (ပထမနာထသုတ္တန်) တရားတော် (၈)
၁၇-၄-၂၀၀၂ တရားရိပ်သာ အေးချမ်းပါသည် တရားတော်
၁၅-၄-၂၀၀၃ ကြိုက်ရာရွေးချယ် လမ်း နှစ်သွယ်
သက်တော် ၅၆ နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမင်္ဂလာ တရားပွဲ
၅-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၁)
၆-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၂)
၇-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၃)
၈-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၄)
၉-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၅)
၁၀-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ်မိကသုတ္တန်တရားတော် (၆)
၂-၁၀-၂၀၀၅ သီလဝံတသုတ္တန် တရားတော်
၅-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၁)
၆-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၂)
၇-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၃)
၈-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၄)
၉-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၅)
၁၀-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၆)
၁၂-၄-၂၀၀၆ ဘာသာရေး အခြေခံ (၇)
၁၂-၄-၂၀၀၆ ဝိပဿနာရှုနည်း တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၀၆ ပါဝေယျကဆင် တိုက်ပွဲဝင်တရားတော်
၁၄-၄-၂၀၀၆ ဘဝတန်ဘိုး တရာတော်
၁၅-၄-၂၀၀၆ သူတော်ကောင်းသာ ပေါင်းသင်းပါ တရားတော်
၁၆-၄-၂၀၀၆ ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ တရားတော်
၁၇-၄-၂၀၀၆ ဆင်းရဲကင်းဝေးချမ်းသာရေး တရားတော်
၁၁-၇-၂၀၀၆ မဟာသတိပဋ္ဌာန် ဝိပဿနာတရားတော်
၁၂-၇-၂၀၀၆ သတိပဋ္ဌာန် ၄ပါးထဲမှ ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ ရှုမှတ်နည်း တရားတော်
၁၃-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပိုင်း၊ ဝိပဿနာ ရှုမှတ်နည်း တရားတော်
၁၄-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပိုင်း၊ ဝိပဿနာ ရှုမှတ်နည်း တရားတော်
၁၅-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗ္ဗ တရားတော်
၁၇-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗ္ဗ တရားတော်
၁၉-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗ္ဗ တရားတော်
၆-၁၀-၂၀၀၆ လူ့ဘဝဂုဏ်ရည် တရားတော်
၁၁-၉-၂၀၀၇ ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ တရားတော်
၁၉-၉-၂၀၀၇ (၅၂၈)သွယ် မေတ္တာပွားနည်း တရားတော်
၂၆-၉-၂၀၀၇ တရားစောင့်မှ ချမ်းသာရ တရာတော် (၁)
၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ဘာဝနာသုတ္တန် တရားတော်
၂၄-၃-၂၀၁၀ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၁)
၂၆-၃-၂၀၁၀ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၂)
၂၇-၃-၂၀၁၀ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၃)
၂၈-၃-၂၀၁၀ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၄)
၁၀-၈-၂၀၁၀ ပညာဘာဝနာပြည့်စုံပါမှ တရားတော်
၁-၁၀-၂၀၁၀ တရားရနိုင်သော အခွင့်အခါကောင်း ၄ပါး
၅၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲမင်္ဂလာ
၁၆-၁၀-၂၀၁၀ အရွယ် ၁၀ပါးတရားတော်
၂၈-၈-၂၀၁၁ ဗြဟ္မဝိဟာရ (မြတ်သောနေထိုင်ရေး) တရားတော် (၁)
၅-၉-၂၀၁၁ ဗြဟ္မဝိဟာရ (မြတ်သောနေထိုင်ရေး) တရားတော် (၂)
၁၄-၄-၂၀၁၂ ဂဏကမောဂ္ဂလာနသုတ္တန် တရားတော်
၂၅-၈-၂၀၁၂ မေတ္တာသုတ္တန် တရားတော်
၉-၉-၂၀၁၂ ဗြဟ္မဝိဟာရ (မြတ်သောနေထိုင်ရေး) တရားတော်
၁၅-၉-၂၀၁၂ ဗြဟ္မဝိဟာရ (မြတ်သောနေထိုင်ရေး) တရားတော်
၃၀-၉-၂၀၁၂ အရိယာဝါသ (အရိယာတို့စံအိမ်) တရားတော်
၂၉-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ် တရားတော် (၁)
၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ် တရားတော် (၂)
၃၁-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ် တရားတော် (၃)
၁၅-၁-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ တရားတော်
၇ ရက် မဟာသတိပဋ္ဌာန် ဝိပသနာ အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁၃-၇-၂၀၁၃ မှ ၁၃-၇-၂၀၁၃
၁။ ၇-၇-၂၀၁၃ နံနက် - မဟာသတိပဌာန် ဝိပဿနာတရားတော်
၂။ ၇-၇-၂၀၁၃ ညနေ - ဓမ္မုဒေသ တရားတော်
၃။ ၈-၇-၂၀၁၃ နံနက် - သတိပဌာန် တရားတော်
၄။ ၈-၇-၂၀၁၃ ညနေ - အနုဂ္ဂဟိတသုတ္တန် တရားတော်
၅။ ၉-၇-၂၀၁၃ နံနက် - သတိပဌာန် တရားတော်
၆။ ၉-၇-၂၀၁၃ ညနေ - တရားရနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းလေးပါ တရားတော်
၇။ ၁၀-၇-၂၀၁၃ နံနက် - သတိပဌာန် တရားတော်
၈။ ၁၀-၇-၂၀၁၃ ညနေ - ပဉ္စဘိက္ခု တရားတော်
၉။ ၁၁-၇-၂၀၁၃ နံနက် - သတိပဌာန် တရားတော်
၁၀။ ၁၁-၇-၂၀၁၃ ညနေ - အကျိုးရှိအောင်နေပါ တရားတော်
၁၁။ ၁၂-၇-၂၀၁၃ နံနက် - သတိပဌာန် တရားတော်
၁၂။ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ညနေ - ဓမ္မပီတိ တရားတော်
၁၃။ ၁၃-၇-၂၀၁၃ - တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
၂၂-၇-၂၀၁၃ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဓမ္မဂုဏ်ရည်ပြ ခရီးစဉ်တရားတော်
1708 Powder Mill Rd Silver Spring, Maryland (MD) 20903 USA
၁၀ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁၃-၆-၂၀၁၃ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၄-၆-၂၀၁၃ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၅-၆-၂၀၁၃ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၆-၆-၂၀၁၃ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၇-၆-၂၀၁၃ ပဉ္စဘိက္ခူ တရားတော်
၁၈-၆-၂၀၁၃ အရိယာကထာပိုင်း တရားတော်
၁၉-၆-၂၀၁၃ အရိယာကထာပိုင်း တရားတော်
၂၀-၆-၂၀၁၃ အရိယာ ပထပဗ်ဗ တရားတော်
၂၁-၆-၂၀၁၃ ဓမ္မပီတိ တရားတော်
၂၂-၆-၂၀၁၃ သမထနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော်
San Gabriel City, Los Angeles County, California, USA
၆ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁။ ၂၁-၅-၂၀၁၄ ညနေ တရားစခန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ တရားတော်
၂။ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၃။ ၂၂-၅-၂၀၁၄ ညနေ သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၄။ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၅။ ၂၃-၅-၂၀၁၄ ညနေ သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၆။ ၂၄-၅-၂၀၁၄ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၇။ ၂၄-၅-၂၀၁၄ ညနေ သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၈။ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၉။ ၂၅-၅-၂၀၁၄ ညနေ သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၁၀။ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၁၁။ ၂၆-၅-၂၀၁၄ ညနေ သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၁။ ၁၃-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၂။ ၁၄-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၃။ ၁၅-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၄။ ၁၆-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၅။ ၁၇-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၆။ ၁၈-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၇။ ၁၉-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၈။ ၂၀-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၉။ ၂၁-၆-၂၀၁၄ သတိပဋ္ဌာန် ကြွေးကြော်သံ
၁၀။ ၂၂-၆-၂၀၁၄ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
မဟာသတိပဋ္ဌာန် ၁၀ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁။ ၁၂-၆-၂၀၁၅ ညနေ တရားစခန်းဖွင့်ပွဲ
၂။ ၁၃-၆-၂၀၁၅ နံနက် ပထဦးဆုံး ကြိုတင်ပွားများရမည့် စတုရာ ရက်ခတရား တရား ၄ ပါး
၃။ ၁၃-၆-၂၀၁၅ ညနေ သတိပဋ္ဌာန် ၄ပါး ကျင့်ကြံပွား တရားတော်
၄။ ၁၄-၆-၂၀၁၅ နံနက် စတုရာ ရက်ခတရား တရား ၄ ပါး
၅။ ၁၄-၆-၂၀၁၅ ညနေ အရိယျာပုပ်တရား ၄ ပါး ရှုမှတ်ပွား
၆။ ၁၅-၆-၂၀၁၅ နံနက် တရားအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ပြည့်စုံရမည့် တရား ၅ ပါး
၇။ ၁၅-၆-၂၀၁၅ ညနေ သပ္ပဇဉ်လေးပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၈။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ နံနက် အလုပ်ပေး တရားတော်
၉။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ညနေ သပ္ပဇဉ်လေးပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၁၀။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်သူများ ရနိုင်သော အကျိုးတရားများ
၁၁။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ ညနေ သပ္ပဇဉ်လေးပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၁၂။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်သူများ ရနိုင်သော အကျိုးတရားများ
၁၃။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ညနေ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းအင်္ဂါ ၄ ပါး တရားတော်
၁၄။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်သူများ ရနိုင်သော အကျိုးတရားများ
၁၅။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ညနေ သောတာပန်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ ၄ ပါး တရားတော်
၁၆။ ၂၀-၆-၂၀၁၅ နံနက် ဝိပဿနာဉာဏ် ဖြစ်ပုံ ပျက်ပုံများ
၁၇။ ၂၀-၆-၂၀၁၅ ညနေ သောတာပန်၏ ပါယ်ရမည့် တရား ၅ ပါး တရားတော်
၁၈။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ နံနက် ပြန်ကြမည့် ယောဂီများအား အမှာ သြဝါဒ
၁၉။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ ညနေ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
၂၀။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ ညနေ တရားစခန်းအောင်ပွဲ အခန်းအနား
၅ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁။ ၁၄-၇-၂၀၁၅ ညနေ သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးတရားတော်
၂။ ၁၅-၇-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၃။ ၁၅-၇-၂၀၁၅ ညနေ သမထနှင့် ဝိပဿနာ တရားတော်
၄။ ၁၆-၇-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၅။ ၁၆-၇-၂၀၁၅ ညနေ တရားမြန်မြန်ရခြင်း၏ အကြောင်းအင်္ဂါ ၅ ပါး တရားတော်
၆။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၇။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ ညနေ အလုပ်ပေး တရားတော်
၈။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ ညနေ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းအင်္ဂါ ၄ ပါး တရားတော်
၉။ ၁၈-၇-၂၀၁၅ နံနက် သတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် တရားတော်
၁၀။ ၁၈-၇-၂၀၁၅ ညနေ သောတာပန်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ ၄ ပါး တရားတော်
၁၁။ ၁၉-၇-၂၀၁၅ နံနက် တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဟတ်မွန်ဘေးမြို့၊
မဟာသတိပဋ္ဌာန် (၇)ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၂၂-၅-၂၀၁၆ သတိပဋ္ဌာန်၏ ဂုဏ်ရည်ပြတရားတော်
၂၃-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဝိပဿနာရှုမှတ်ပုံ အကျဉ်းချုပ်
၂၃-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၅-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၅-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၈-၅-၂၀၁၆ နံနက် ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၂၈-၅-၂၀၁၆ ညနေ ဆင်းရဲကင်းစင် သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် တရားတော်
၁။ ၃-၆-၂၀၁၆ နံနက် တရားစခန်းဖွင့် သြဝါဒ
၂။ ၃-၆-၂၀၁၆ ညနေ အကျိုးရှိအောင်နေ တရားတော်
၃။ ၄-၆-၂၀၁၆ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၄။ ၄-၆-၂၀၁၆ ညနေ သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၅။ ၅-၆-၂၀၁၆ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၆။ ၅-၆-၂၀၁၆ ညနေ သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၇။ ၆-၆-၂၀၁၆ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၈။ ၆-၆-၂၀၁၆ ညနေ သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၉။ ၇-၆-၂၀၁၆ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၁၀။ ၇-၆-၂၀၁၆ ညနေသတိပဋ္ဌာန် ဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၁၁။ ၇-၆-၂၀၁၆ ညနေ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
၁၀-၆-၂၀၁၆ ရှုမှတ်နည်း အလုပ်ပေးတရား
၁၁-၆-၂၀၁၆ ဝန်ခံခြင်း နှင့် ဟောခဲ့သည်
၁၂-၆-၂၀၁၆ အကျိုး ရှိအောင်နေပါ
၁၉-၆-၂၀၁၆ English Translation
မဟာသတိပဋ္ဌာန် ၅ ရက် အချိန်ပြည့် တရားစခန်း
၁၁-၅-၂၀၁၇ နံနက် ကာယ၊ဝေဒနာ၊စိတ္တ၊ဓမ္မ၊ သတိပဋ္ဌာန် တရားရှုမှတ်နည်း သင်တန်းတရား
၁၁-၅-၂၀၁၇ နေ့လည် အလုပ်ပေးတရားတော်
၁၁-၅-၂၀၁၇ ညနေ သတိပဋ္ဌာန် တရားရှုမှတ်နည်း သင်တန်းတရား
၁၂-၅-၂၀၁၇ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် တရားရှုမှတ်နည်း သင်တန်းတရား
၁၂-၅-၂၀၁၇ နေ့လည် အလုပ်ပေးတရားတော်
၁၂-၅-၂၀၁၇ ညနေ အခွင့်ကောင်း ၄ပါး တရားတော်
၁၃-၅-၂၀၁၇ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ကျင့်စဉ်တရားတော်
၁၃-၅-၂၀၁၇ နေ့လည် အလုပ်ပေးတရားတော်
၁၃-၅-၂၀၁၇ ညနေ ကြိုက်ရာရွေးချယ် လမ်းနှစ်သွယ်တရားတော်
၁၄-၅-၂၀၁၇ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် ဝေဒနာနုပဿနာတရားရှုမှတ်နည်း သင်တန်းတရား
၁၄-၅-၂၀၁၇ နေ့လည် အလုပ်ပေးတရားတော်
၁၄-၅-၂၀၁၇ ညနေ ဘဝတာဝန်ကြေပြွန်ပါစေတရားတော်
၁၅-၅-၂၀၁၇ နံနက် အရိယျာပုပ် ၄ပါး ရှုမှတ်ပုံ တရား
၁၅-၅-၂၀၁၇ နေ့လည် အလုပ်ပေးတရားတော်
၁၅-၅-၂၀၁၇ ညနေ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြဝါဒ ၃ ခွန်း တရားတော်
၁၅-၅-၂၀၁၇ ညနေ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်
၂၂-၅-၂၀၁၇ နံနက် မဟာသတိပဋ္ဌာန် ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြ အလုပ်ပေးတရားတော်
၂၂-၅-၂၀၁၇ ညနေ မဟာသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တရားတော်
၂၃-၅-၂၀၁၇ နံနက် ကာယနုပဿနာပိုင်း တရားတော်
၂၃-၅-၂၀၁၇ ညနေ မဟာသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် (စြင်္ကန်) တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၇ နံနက် ဝေဒနာနုပဿနာပိုင်း တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၇ ညနေ အခွင့်ကောင်း ၄ပါး တရားတော်
၂၅-၅-၂၀၁၇ နံနက် ဌိတော ဝါ ဌိတောမှီတိ ပဇာနာတိ ရှုမှတ်ပုံ တရား
၂၅-၅-၂၀၁၇ ညနေ ဝိပဿနာဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၇ နံနက် ဣရိယာပထပိုင်း တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၇ ညနေ ဝိပဿနာဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၇ နံနက် ဣရိယာပထပိုင်း တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၇ ညနေ ဝိပဿနာဂုဏ်ရည်ပြ တရားတော်
၂၀-၅-၂၀၁၈ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၀-၅-၂၀၁၈ ညနေ တရားရခြင်း၏ အကြောင်းအင်္ဂါ ၅ ပါး တရားတော်
၂၁-၅-၂၀၁၈ နံနက် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၁-၅-၂၀၁၈ ညနေ ကြိုက်ရာရွေးချယ် လမ်း နှစ်သွယ် တရားတော်
၂၂-၅-၂၀၁၈ နံနက် ဣရိယာပထပိုင်း တရားတော်
၂၂-၅-၂၀၁၈ ညနေ အရိယာစံအိမ် တရားတော်
၂၃-၅-၂၀၁၈ နံနက် အရိယာပုပ် ၄ပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၃-၅-၂၀၁၈ ညနေ အရိယာစံအိမ် တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၈ နံနက် အရိယာပုပ် ၄ပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၄-၅-၂၀၁၈ ညနေ အရိယာစံအိမ် တရားတော်
၂၅-၅-၂၀၁၈ နံနက် အရိယာပုပ် ၄ပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၅-၅-၂၀၁၈ ညနေ အရိယာစံအိမ် တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၈ နံနက် အရိယာပုပ် ၄ပါး ရှုမှတ်ပွား တရားတော်
၂၆-၅-၂၀၁၈ ညနေ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားတော်